Vista's Colorful Planet: Together
Together we can ...........!
nn: ကွန်မန့် ဖတ်ပီးတဲ့အချိန်မှာ နာ.. အဲဒီပန်းရဲ့အလှကို ခံစားလို့ မရဖစ်တွားတယ် ဗျစ်ရယ်... အိဟီးးး နာ အလှတရားကို ဘယ်လိုနားလည်ရပါတော့မလဲ ဗြဲ...
ညည ဟာ ခံစားချက်မရှိတဲ့ အသည်းနှလုံးမရှိတဲ့ အကြင်နာတရားကင်းမဲ့တဲ့ အလှတရား မမြင်တတ်တဲ့ ဘလိုင်းမကြီး (ဘာကျန်သေးဒုန်း)
ငါတို့အတူတကွ ကန်နိုင်တယ်ဆိုပဲ ပန်းလေးသနားစရာဟယ်...
အပေါ်ဆုံးက ကွန်မန့် ကိုဖတ်ပီးတော့
အလှတရားကို မသိ ဖြစ်သွားတယ်
ကွန်မန့် ကို မဖတ်မိခဲ့ရင်
Together တဲ့လား။ ချစ်စရာ လွမ်းစရာလေး။
ပန်းလှလှလေး လာကြည့်သွားပါတယ် ညီမလေး။
တူဂဲသား ဝီခန်ဘီ ဖလားဝါး
comment ပေးရမယ်ဆိုလို့ လာပေးပါတယ်
မွေးတည်းက တစ်ယောက်ပဲ ရှိတယ် ဆိုတော့လဲ .. ချစ်ကြပါ
မမယ်ကိုး ကျေးဇူးပါလာကြည့်လို့ 
Steve စိတ်ကူးယဉ်ပါ ရင်ဟုတ်ဘူး ဟိဟိ
( စိတ်ကူးယဉ်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူး )
မေ စည်းလုံးခြင်းသည် အင်အားပေါ့
Together we can fight လို့ ရေးချင်လည်းရတာပဲ ဟဲဟဲ
thanks for the visit! i like your site since i love flower and macro shots of flowers! its really gorgeous!